Ny sabotsy anefa dia efa nisy indray ny mpiasan’ny orinasan-gazety izay nampiasa karatra maha-mpanao gazety, ary tsy sandoka, voasambotra. Nanendaka izy io ary mpiambina no tena asany saingy misy soratra « Presse » avokoa ny mpiasa ao amin’ilay orinasa na ho an’ny mpamafa trano aza.
Nivoaka tamin'ny fahanginany i Paul Rabary minisitry ny fanabeazam-pirenena tamin'ny andron'ny Hvm. Nilaza izy fa tsy tokony hatao politika fampisehoana toy ny ataon'ny filoha amin'izao ny fitondrana ny firenena. Fisehosehoana sy fandaniam-bola no betsaka amin'ireny tatitra tamin'ny 100 andro ireny kanefa tsy tena hita misy mivaingana. Manohana ny tokony hanaovana ny fitsapan-kevi-bahoaka i Paul Rabary saingy mitaky ny hanovana ny andininy faha-54 sy 72 ao amin'ny lalàmpanorenana izay tena fandrika ho an'izay filoha mitondra.
Miziriziry fatratra ireo mpomba ny filoha Rajoelina fa ho vitany ny hampihena ny vidin-tsolika ary hijoro hatramin'ny farany izy hampihenan'ny kompanian-tsolika ny tombony alain'izy ireo. Manamafy ireo mpomba azy fa tsy hanaiky intsony ny tsindry ataon'ny kaompania ny filoha Rajoelina satria efa mihoa-pampana ny tombony alain'ireo kaompania ireo. Taorian'ny fanambaran'ny filoha iny anefa, tsikaritra fa nihanihena ny famatsiana lasantsy teny amin'ny tobin-tsolika. Mihenjana ny tadin-dokanga.
Mety hanapotika ny lazan'i Madagasikara eo amin'ny iraisam-pirenena ny fanambaràna ady nataon'i Andry Rajoelina amin'ireo andrarezin'ny solika mandraharaha eto Madagasikara. Karazan'ny mampisintaka ireo mpandraharaha vahiny ireny fanambarana izay nataony ireny ka tsy aharisika azy ireo hiasa eto Madagasikara. Any anaty birao na fifanarahana manokana no tokony hanaovany resaka tahaka ireny fa tsy atao imasombahoaka, hoy ny mpanao politika.
Trano miisa 150 tafo no kilan’ny afo tao Ifanadiana ny alin’ny sabotsy hifoha alahady teo. Tapaka hatramin’ny lalam-pirenena satria saika ny tanàna iray manontolo no nirehitra. Nifanampy ny olona satria tsy nisy mpamonjy voina tao an-tanàna ary izany rahateo no nampananosarotra ny famehezana ny afo izay ny maraina aza mbola nisy ampahany tsy maty ihany. Mba tsy nisy ny aina nafoy na izany aza.